The Galaxy S7 na S7 Edge nweta mmelite ohuru | Gam akporosis
Afọ anọ agafeela kemgbe Samsung si Galaxy S7 usoro malitere n'oge ahụ dị ka ọkwa nke oge ahụ. Ekwentị mkpanaaka ndị a nwere atụmatụ na nkọwapụta teknụzụ nke na 2016 nọ n'etiti ndị kachasị elu, mana ọ bụghị taa; Ọzọkwa, anyị na-ekwu maka ọnụ ọnụ dịtụ ochie.
Agbanyeghị, nke a abụghị nsogbu maka obodo dị mkpa nke ndị ọrụ ka nwere iji ha eme ihe, ọ bụ ya mere South Korea ji nọrọ na ọrụ nke inye mmelite ọhụụ na nso nso a, nke a na-ezube iji nyekwuo ndụ Galaxy S7 na Galaxy S7 ihu, mobiles abụọ ndị kwesịrị ịnata ngwugwu firmware nke nwere nzube nke imegharị nchekwa.
Nche nke Galaxy S7 na-abawanye ekele maka mmelite ọhụrụ
The Galaxy S7 na S7 Edge kwesiri inweta ihe ngwanrọ ohuru ha na March nke afo a. Ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ South Korea ji jiri ngwungwu ngwa ngwa a jidere anyị na nzuzo, nke isi atụmatụ ya bụ nchekwa.
Maka ugbu a mmelite ahụ na-agbasa gafee United States na EuropeAgbanyeghị ọ bụghị draịva niile na ngwaọrụ ndị a nwere ike ịnata ya ugbu a. Ikwesiri inyocha ọkwa iji chọpụta ọbịbịa ha na njedebe ya, ma ọ bụrụ na ọ pụtaghị, ọ ga-ekwe omume na elekere ole na ole sochirinụ ma ọ bụ ụbọchị na-esote ha ga-erute ekwentị niile. N'otu aka ahụ, ọ bụ oge maka mmelite ahụ iru ogo ụwa. A na-enyekwa ihe ngwanrọ ngwanrọ a na South Korea.
Echere na anyị na-ekwu maka mmelite kachasị ọhụrụ maka usoro Galaxy S7. N'otu aka ahụ, Samsung nwere ike iju anyị anya n'ọnwa ndị na-abịanụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » The Galaxy S7 na S7 Edge jụrụ ịnwụ: ha nwetara mmelite ọhụrụ
Kacha ọhụrụ Galaxy S20 na Pixel dakọtara na ARCore